Google I / O dia nanamora ny fampiasana Apple | Vaovao IPhone
Ireo orinasa roa mitarika eo amin'ny tontolon'ny haitao, ny Internet ary ny rindrambaiko dia manana ny zava-mitranga akaiky tokoa amin'ny fotoana dia misy vokany eo noho eo, ary izany dia ny fampitahana, izay tsy azo ihodivirana foana, ho mandeha ho azy ihany koa ity indray mitoraka ity. Tsy ilaina ny misintona ny trano famakiam-boky mba hahitana izay nolazain'i Google taorian'ny nahitany izay lazain'i Apple tamin'ny faha-8, satria ny hetsika Google dia mbola ao an-tsaintsika vao tsy ela akory izay. Ary amin'ity taona ity ny fiheverana dia izany Navelan'i Google teo amin'ny lovia ho any Apple izy io ka ity iray ity dia mitondra ny saka any anaty rano, satria izay voalaza fa fanavaozana be ao amin'ny Google I / O dia mbola tsy nisy. Azontsika atao mihitsy aza ny milaza fa ny ankamaroan'ny vaovao natolotr'i Google andro hafa dia efa natolotr'i Apple herintaona lasa izay.
3 Tetikasa Brillo
5 Tsy fahatongavana lehibe
6 Anjarany Apple izao
Araka ny tsiliantsofina nanjo ny Apple sy ny iOS 9 vaovao, Google dia nanilika ireo tsy ampoizina lehibe ary nanapa-kevitra ny hanome ny rafitra fiasa vaovao fitoniana bebe kokoa ianao, hanatsara ny fahombiazany, hampitombo ny fiainana bateria ary hanamboatra bug. Tsy taona tsara ho an'ny Lollipop na ny iOS 8, miaraka amin'ny fitarainana maro avy amin'ny mpampiasa, indrindra ireo fitaovana taloha izay nahita ny fiakaran'ny asany taorian'ny fanavaozana ilay kinova vaovao.
Inona no vaovao amin'ny Android M? Fomba vaovao fakana tahaka sy apetaka izay tsy azo ihodivirana fa mitovy amin'ny an'ny iOS, eny, miaraka amina endrika «Famolavolana fitaovana» ​​bebe kokoa, fomba iray vaovao hangataka fahazoan-dàlana amin'ny fampiharana hampiasa fakan-tsary, mikrô sy ireo fiasa hafa an'ny fitaovantsika ilay iray ampiasain'ny iOS mandritra ny taona vitsivitsy, ary amin'ny zavatra hafa kely.
Aloavy amin'ny alàlan'ny fitaovanao finday mampahafantatra ny tenanao amin'ny dian-tananao. Misy mahalala ve? Google dia nanova ny Google Wallet ho Android Pay ary manao izany amin'ny alàlan'ny rafitra mitovy amin'ny Apple sy Apple Pay, izay, araka ny hitanao, dia mandika betsaka noho ny anarany izy. Mazava ho azy fa nanambara rafitra vaovao izy ireo, Hands Free, izay ahafahanao mandoa "tsy am-pelatanana." Niditra tao amin'ny magazay ny mpividy, nilaza fa "Te-handoa amin'ny Google aho" ary miala rehefa nandoa ny vokatra, nefa tsy nikasika ny poketrany na ny telefaoniny. Tetikasa iray izay mamela fisalasalana maro toy ny fiarovana azy, saingy mbola ao anatin'ny dingana voalohany ary raha mandeha izy dia mety ho tena vaovao.
Io dia toy ny iantsoan'ny Google ny tetikasany hanomezana fifandraisana amin'ireo zavatra ampiasaintsika isan'andro. "Internet an'ny zavatra" ary mampatsiahy ny HomeKit, izay nolazain'i Apple taminay herintaona lasa izay saingy mbola tsy nahita na inona na inona izahay. Google dia nanao toy izany koa, niresaka momba izany fa tsy nanome antsipiriany marobe, ary hiandry ny faran'ny taona isika vao hahita zavatra tena misy momba azy.
Ny kintan'ny hetsika sy izay resahin'ny tsirairay. Tsy zava-baovao velively izany, na dia kapoka mafy ho an'i Apple sy ny drafitra fitahirizany rahona mampihomehy aza izany. Ny fitahirizana ny sarinao ao anaty rahona dia efa hatry ny ela, fankasitrahana ny tarehy koa (iPhoto efa an-taonany). Google Photo dia ho nohatsaraina "Photos in iCloud", miaraka amina endri-javatra fanampiny mahaliana (toy ny famoronana gif rehefa misy sary ao anaty fiparitahana na misesy) ary ambonin'izany rehetra izany, maimaimpoana ary tsy misy fetra. Mazava ho azy, araka ny efa nolazaiko anao tao ny lahatsoratra momba ity serivisy ity, ny toe-piainan'io dia mamela fisalasalana maro.
Tsy fahatongavana lehibe
Nifarana ny hetsika tsy misy vaovao momba ny Android Wear, Android Car ary Android TV. Tsy nisy fitaovana vaovao naseho koa. Mahaliana fa ny sehatra iray izay nitarihan'i Google ny Apple, dia ny smartwatches, tamin'ity taona ity dia tsy nanana anjara toerana lehibe tao amin'ny Google I / O, angamba ny fotoana tena nilany azy hampiatoana ny fahombiazan'ny Apple Watch .
Anjarany Apple izao
Amin'ny 8 Jona dia hanana fotoana hitarika ny Google i Apple, na tsia. Toa efa tapitra ireo fotoana nandraisana an'i Google izay noheverina ho manavao indrindra sy mampidi-doza indrindra, ary dia ao ambadiky ny Apple izao. Moa ve ny orinasa Cupertino hisambotra ny fotoana omen'ny Google sa hijanona koa izy io? Afaka herinandro isika dia hialana amin'ny fisalasalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Google I / O dia nanamora ny fandehan'i Apple
Fidel Lopez dia hoy izy:
Mpamorona iOS aho ka eo anilan'i Apple, saingy ny zavatra ratsy momba izany dia azo antoka fa tsy misy "fanavaozana" Apple ao amin'ny WWDC hahaha ...
Valiny tamin'i Fidel Lopez
TuLotero, mandray anjara amin'ny State Lottery sy filokana amin'ny iPhone